सरु अर्थात् बाइकको डाक्टर !
काठमाडौं- रातोपुलमा रहेको 'आशिष मोटरसाइकल वर्कशप'की सरस्वती सुवाल अर्थात् सरु बाइक मेकानिक हुन् ।
केही दिनअघि लोकान्तरकर्मी वर्कशपमा पुग्दा उनी बाइक बनाउँदै गर्दा भेटिइन् ।
भन्छिन्, 'आफ्नो काम गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिन पाउँदा गौरवान्वित छु ।'
कसरी सिक्नुभयो त बाइक ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा उनले आफू बाइक मेकानिक बन्नुमा पति आशिषको ठूलो साथ र सहयोग रहेको बताइन् ।
'सिक्छु भनेर सिकेको त होइन,' उनले थपिन्, 'पतिलाई सहयोग गर्दागर्दै उहाँले सिकाउनुभयो ।'
उनको भनाइ मान्ने हो भने कोठा वरपरका महिलाहरू घाम तापेर बस्थे, अरूको कुरा काट्थे । तर उनलाई मन पर्दैनथ्यो ।
शुरूशुरूका दिनमा उनलाई बाइक बनाउने काम 'आकाश' लागेको थियो । कसरी गर्ने होला हुन्थ्यो रे !
'मानिसहरू बाइकको चेन टाइट गर्ने भन्छन् । नटबल्टु पनि देख्दिनँ । कसरी गर्ने होला भन्ने लाग्थ्यो,' सिकाइका दिन सम्झिन्छिन् उनी, 'पछि सिकेपछि सजिलो लाग्यो । पहिलोपटक बाइकको चेन टाइट गर्दा खुशीले हावामा उडेको जस्तो महसूस भएको थियो ।'
उनले रोयल इन्फिल्डद्वारा सञ्चालित तीन दिने मोटरसाइकल मर्मत सम्बन्धी तालिम पनि लिएकी छन् । ५२ जना सहभागी हुँदा उनी एक्ली महिला थिइन् ।
तालिमको अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, 'तालिममा सबै जना पुरुष, म एक्लै महिला हुँदा शुरूमा मलाई अड लाग्यो । तर सबैले राम्रै बिहेभ गरे । सिकाइ राम्रै रह्यो ।'
तर पनि उनले पुरुषले जत्तिकै हौसला र साथसहयोग पाइन् । भन्छिन्- महिलाले पनि यस्तो काम गर्नुपर्छ । तिमीले गर्न सक्छौ भनेर सबैले हौसला दिनुभयो । ममा त्यसले उर्जा थपियो ।
उनी अहिले बजारमा चलेका अधिकांश बाइक बनाउन सक्छिन् ।
उनको अनुसार वर्कशपमा काम गरिरहँदा बाइक तथा बसबाट मानिसहरूले हेर्थे । र पछि उनीहरूले नै सुनाउँथे रे- मैले तपाईंले काम गरेको देखेको थिएँ । त्यही भएर आज बाइक बनाउन आएको ।
उनीहरू आफूले गरेको कामप्रति खुशी हुँदै भन्थे रे- अबदेखि बाइक सर्भिसिङदेखि बिग्रिँदा यहिँ बनाउन आउँछु ।
ग्राहकको राम्रा प्रतिक्रियाले आफूलाई काममा इमान्दार हुन प्रेरित गर्ने उनले सुनाइन् ।
वर्कशपमा मानिसहरू बाइक बनाउने मेकानिक खोज्दै मान्छेहरू आउँथे रे ! सरुले 'म नै हो मेकानिक । के गर्नुपर्‍यो' भन्थिन् । शुरूमा नपत्याए पनि उनीहरूले अगडि बाइक तथा स्कूटर बनाइदिएपछि राम्रो रेस्पोन्स गर्न थालेको उनको अनुभव छ ।
'एकपटक आएका मानिसहरूले बाइक बनाउन अन्त लाँदैनन् । नियमित ग्राहकको रूपमा रहनुभएको छ,' सफलता सुनाउँछिन् उनी, 'अझ उहाँहरूले अन्यलाई पनि यहाँ बाइक मर्मतका लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ । यसले मलाई काममा लगातार जुटिरहन प्रेरित गर्छ ।'
महिलाले खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने तथा चुलो चौकोमा मात्रै रुमल्लिनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्दैन । बरू आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिनका लागि कोशिश गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
'कति महिलाहरू हात फोहोर हुन्छ । बल प्रयोग हुन्छ भनेर यस्तो काम गर्न हिच्किचाउने गरेका छन्,' महिलाहरूलाई उनको सुझाव छ, ' हवाइजहाज पनि महिलाले उडाएका छन् । पुरुषले गर्ने काम महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने छैन ।'
उनी आफ्नो सफलतामा पतिको साथ र सहयोगलाई कहिल्यै भुल्दिनन् । वर्कशपमा सरुसँगै उनका पति आशिष पनि सँगै काममा जुटिरहेका हुन्छन् । 'पति यो पेशामा नभएको भए सायद म पनि यो स्थानमा हुन्नथेँ होला । उहाँले लगातार सिकाउनुभयो मैले सिकिरहेँ । नसकेको र नजानेको कुरा मैले उहाँलाई सोध्थेँ । उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो,' उनले भनिन् ।
हामीले अन्तिममा सरुलाई सोधेका थियौं, तपाईंलाई बाइकको डाक्टर भनेर सम्बोधन गर्दा हुन्छ ?
उनले यसको जवाफ पतिले भन्ने गरेको भनाइसँग जोडिन् ।
बाइकबारे सरुलाई पतिले कहिलेकाहिँ सुनाउँछन् रे- शरीरको अंगजस्तै बाइकको पनि पाटपूर्जा हुन्छ । मान्छेको उपचार गर्नेलाई डाक्टर भनिन्छ भने बाइकको मर्मत गर्नेलाई मेकानिक भनिन्छ । तिमी पनि बाइकको डाक्टर हो ।